Goodvibes: Codsi aad ufiican oo maqal looga dhageysto internetka | Laga soo bilaabo Linux
Xaqiiqdii, marka isticmaale rabo ku cuno (daawo / dhageyso) waxyaabo badan oo badan oo khadka tooska ah ah, iyadoo aan loo eegin nooca ay tahay Nidaamka hawlgalka haysato, taasi waa, haddii ay tahay mid lahaansho, mid xiran iyo mid ganacsi ama mid bilaash ah, furan oo bilaash ah, waxay u badan tahay inaad furi doonto biraawsarka aad doorbideyso oo aad ku xirmi doonto websaydhka aad dooratay si aad uga hesho.
Si kastaba ha noqotee, codsiyada desktop, labadaba soo dejinta iyo daawashada waxyaabaha la sheegay, si looga fogaado isticmaalka Web browser, kuwaasoo guud ahaan cuna kheyraad fara badan, sida Processor, RAM iyo Bandwidth. Oo ka mid ah barnaamijyada jira, mid ka mid ah ayaa ah dareen wanaagsan, taas oo ah codsi fudud oo fudud GNU / Linux taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud uga dhagaysanno codka internetka, labadaba khadka tooska ah iyadoo laga sii daayo tusaale ahaan raadiyaha, iyo khadadka khadka tooska ah ee horey loo duubay.
Waxaa xusid mudan in dhawaanahan aan sidoo kale faallo ka bixinay mid kale codsi fudud oo fudud la xiriira maareynta maqalka iyo codkawacid Diiwaanka Audio, oo aan kugula talineyno inaad aqriso haddii aadan awoodin inaad waqtigaas sameyso, adigoo gujinaya xiriirka hoose ee hoose:
"Audio Recorder waa un barnaamij heer sare ah oo loogu talagalay duubista codka (dhawaaqyada) kombiyuutarka. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa adeegsadaha inuu ka duubo codadka aaladaha ay ka mid yihiin makarafoonnada, kaamirada websaydhka, kaararka codka, iyo sidoo kale barnaamijyada ay ka mid yihiin qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'multimedia players' ama daalacashada internetka iyo kuwo kale.".
1 Goodvibes: Ciyaaraha Raadiyaha Internetka
1.1 Waa maxay Goodvibes?
1.4 Talo soo jeedin
Goodvibes: Ciyaaraha Raadiyaha Internetka
Waa maxay Goodvibes?
Isaga oo daliishanaya degel rasmi ah, waxaa si kooban ugu sharaxay soosaaraheeda sida soo socota:
"Goodvibes waa miisaanka raadiyaha Internetka ee miisaanka yar ee GNU / Linux. Dhexdeeda waad ku badbaadin kartaa saldhigyada aad ugu jeceshahay adoo gelinaya, intaas waa intaas. Codsigu ma lahan wax shaqo ah oo uu ku raadinayo idaacadaha, waa inaad gelisaa URL-ka codka laftiisa laftiisa. Ma ahan wax aad u fudud in la isticmaalo, waan ogahay, laakiin wax ka fiican taas ma sahlana".
Hada, nooca xasilloon ee ugu dambeeyay la heli karo waa lambarka 0.6, kaas oo si toos ah loogala soo bixi karo isku-dubbaridka iyadoo la adeegsanayo git, sida ku cad websaydhkaaga qaybta rakibaadda. Waxaa sidoo kale si toos ah looga rakibi karaa keydadka inta badan GNU / Linux Distros, sida kiiskeyga ka ahaa aniga Distro MX Linux, isagoo ku qanacsan in la heli karo ay ahayd nambarka nooca 0.4.2.
Isku mid, waxaan ku rakibey amarka fudud ee hoose: «sudo apt install goodvibes». Si kastaba ha noqotee, wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad booqan kartaa boggooda rasmiga ah GitLab y GitHub.
Sida lagu arki karo sawirka isla markiiba kor ku xusan, isdhexgalka ugu weyn waa mid aad u yar ama nadiif ah, wuxuu leeyahay bar sare oo leh 2 qaybood:
Qaybtaan koowaad waxaad ka heli doontaa xulashooyinka soo socda:
Ku dar saldhiga: In lagu daro Magaca iyo URI (cinwaanka websaydhka) ilaha codka ee khadka tooska ah laga helo, ha ahaado qulquli ama fayl maqal ah oo taagan ama firfircoon
doorbidida: Si aad u muujiso daaqad leh 3 ikhtiyaar oo dheeri ah, oo loo yaqaan 'Misc, Display and Controls', oo ay ka mid yihiin, maareynta taranka iyo isdhexgalka D-Bus, maareynta isdhexgalka muuqaalka muuqaalka iyo muuqaalka muuqaalka, iyo maaraynta isdhexgalka Hoykeys on kiiboodhka
Xidh GUI: In la xidho (qariyo) arjiga iskuxirka garaafka iyada oo aan la xidhin durdurka maqalka ee socda.
Salir: In gabi ahaanba la xidho arjiga.
Qeybtan labaad waxaad ka heli doontaa xulashooyinka soo socda:
Caawinta khadka tooska ah: In laga furo bogga rasmiga ah ee GitLab si dadka isticmaala ay si fudud ugu heli karaan dukumiintiyada dalabka.
ku saabsan: Si aad u muujiso daaqada macluumaadka, oo lagu muujiyay sawirka isla markiiba kor ku xusan.
In daaqada doorbidka, si aad u faahfaahsan, waxyaabaha soo socda ayaa lagu maareyn karaa:
Taageerada muhiimka ah ee warbaahinta badan: Furayaasha , iyo kuwaa oo kujira kumbuyuutarrada badankood.
Ogeysiisyada: Macluumaadka soo baxa marka heesta la beddelo.
Ikhtiyaarka ah in aan la laalin: Si looga hortago in nidaamka la hakiyo inta uu raadiyaha ciyaarayo.
Shaqada Autoplay: Si aad u bilowdo u ciyaarida raadiyaha ugu dambeeya markii arjigu bilaabmo.
Taageerada MPRIS2: Si loogu helo isdhexgal wanaagsan kombuyuutarrada casriga ah.
Ka sokow, isaga horumariye faallo soo socda:
"Kuwa idinka mid ah ee inta badan ku nool terminaal kana fogaada isdhexgalka isticmaaleyaasha garaafka, waa inaad ogaataa inaad dhisi karto Goodvibes adoon haysan GUI, oo aad ku xakameyn kartid adoo adeegsanaya macmiilka khadka taliska ah".
Anigu shaqsiyan waxaan isku dayay dhowr idaacadaha internetka, oo dhammaantoodna aad u fiican. Laakiin wixii aan ugu jeclaa ayaa ah inaan awoodo inaan duubo URL-yada Podcast-ka in aan u xushay caddeyn ahaan. Dhammaan websaydhadu ma bixiyaan a URI ama toos URL si loo cuno firfircoonaan ama durdur dhawaaq maqal ah ee a raadiyaha la duubay ama Podcast, Markaa khiyaano (jabsasho) Aniga ayaa istcimaalay tan soo socota, markii aanan helin URI ama URL toos ah:
"Waxaan isticmaalaa aaladda wax lagu soo dejisto sida Video DownloadHelper, si aan u bilaabo soo dejinta feylka codka oo ay ku jiraan durdurrada codka ama dhawaaqa joogtada ah, ka dib ayaan nuqul ka helayaa xiriiriyaha soo dejinaya oo joojiya soo dejinta, isla markaana gala isla URI. Marka waan dhageysan karaa Podcast-kayga iyo qaar ka mid ah raadiyeyaasha ka socda Goodvibes".
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Goodvibes», taas oo ah codsi fudud oo fudud oo loogu talagalay GNU / Linux oo noo ogolaanaya inaan si fudud uga dhagaysanno codka internetka, labadaba khadka tooska ah ee tooska ah, tusaale ahaan raadiyaha, iyo sidoo kale khadka tooska ah ee loo yaqaan 'podcast' oo horey loo duubay; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Goodvibes: Codsi aad ufiican oo maqal looga dhageysto internetka
Maqaallada sidan oo kale ah ayaa lagu qanacsan yahay. Si aan u dhageysto raadiyaha internetka, waxaan isticmaalay barnaamijka Pyradio ee aadka u fudud, kaasoo si dhib leh u cuna agabyada. Laakiin sababo jira awgood kuma guuleysan inaan ku rakibo MX Linux (waa inuu noqdaa wax la xiriira Pip). Si qariib ah, waxaan u maareeyay inaan ku rakibo BunsenLabs, oo waliba ku saleysan Debian Buster.
Ku jawaab pedruchini
Nooc ka mid ah RansomEXX ee loogu talagalay Linux ayaa la ogaaday
Bountysource: Madal Maalgelinta loogu talagalay Barnaamijka Furan ee Source